Muqdisho Garowe Online
Posted On 04-01-2018, 08:14AM
MUQDISHO, Soomaaliya- Ra’isal wasaaraha dowladda Federaalka Soomaaliya, Xasan Cali Khayre, ayaa wareegto uu soo saaray saaka xilli hore xilkii kaga qaaday saddex kamid ah golaha xukuumaddda.
Mas’uuliyiinta xilka laga qaaday waxaa ku jira wasiirka Arrimaha Gudaha dowladda Soomaaliya, Cabdi Faarax Siciid Juxa, oo maanta usoo safri lahaa magaalo madaxda Puntland ee Garoowe.
Wareegtadan oo uu warbaahinta ka akhriyay Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya, Eng. Cumar Cismaan Yariisow, waxaa sidoo kale xilalkoodii ku waayay; Wasiirkii Arrimaha Dibadda Yusuf Garaad Cumar iyo Wasiirkii Ganacsiga iyo Warashada Khadra Axmed Ducaale.
Boosaskaas ayaa isla digreetadan waxaa loogu magacaabay mas’uuliyiin cusub, kuwaasoo loo diray fariin ah inay si deg deg ah ula wareegaan shaqadooda.
Danjire Axmed Ciise Cawad, ayaa laga dhigay wasiirka Arrimaha Dibadda dowladda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye isna waxaa loo magacaabay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya, halka Cabdi Maxamed Sabriye laga dhigay wasiirka arimaha gudaha.
Ilaa hadda kama aysan hadlin mas’uuliyiinta xilka laga qaaday sida ay u arkaan.
Lama oga sababta keentay xilka qaadista mas’uuliyiinta, waxaana lagusoo beegay xilli Madaxweyne Farmaajo booqasho ku tagayo Todobaadka dambe maamulka Puntland.
Muddooyinkii dambe waxaa xumaa xiriirka ka dhaxeeya Khayre iyo Juxa, waana tan loo aanaynayo in Khayre uu magacaabistiisii 2aad sameeyo xilli uu xafiiska joogo wax ka yar 1 sano.
Dhinaca kale tallaabadan ayaa imaanaysa xilli ay bannaanyihiin jagooyin ay iska casileen wasiirradii Arrimaha Diinta iyo Gargaarka.